बाँकेमा कोरोना संक्रमितको सँख्या १५७० – BANKE POST
बाँकेमा शनिबार गरीएको परिक्षणमा २३ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन । भेरी अस्पताल नेपालगन्जको परिक्षणमा १५ र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरको परिक्षणमा ८ गरी २३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार दुबै अस्पतालको ल्यावमा गरिएको परिक्षणमा बाँकेका १७ जना र अन्य जिल्लाका ६ जनामा संक्रमण देखिएको हो । सरकारले सबै अस्पताललाई कोरोना परिक्षणको अनुमती दिएसँगै नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरले समेत कोरोना परिक्षण सुरु गरेको छ । यसअघि भेरी अस्पताल नेपालगन्ज र निजि स्तरबाट संचालित वागेश्वरी डाईग्नोष्टिक पोलिक्लिनिक सेन्टरले मात्र बाँकेमा कोरोना परिक्षण गर्दै आएका थिए । आज थपिएका नयाँ संक्रमितसँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमितको सँख्या १५७० पुगेको छ ।
Posted on May 13, 2020 May 13, 2020 Author Hari Adhikari
३१ बैशाख, नेपालगञ्ज । बाँकेको कोहलपुरमा एम्बुलेन्स खोलामा खस्दा ६ जना घाइते भएका छन् । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरबाट चार दिने सुत्केरी बोकेर गइरहेको भे १ च ३१७१ नम्बरको एम्बुलेन्स आज कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ स्थित रोहिणी खोलामा खसेको प्रहरीले जनाएको छ । एम्बुलेन्स सडकदेखि झण्डै सय मिटर तल खोलामा खसेको हो । एम्बुलेन्समा […]
एभरेष्ट बैंकद्वारा ११ नं. वडा कार्यालयलाई राहत हस्तान्तरण
२६ बैशाख, बाँके । एभरेष्ट बैंक लिमिटेड कोहलपुर शाखाले ११ नं. वडा कार्यालयलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ । लकडाउनका कारण उत्पन्न परिस्थितीका कारण समस्यामा परेका विपन्न परिवारलाई मध्यनगर गर्दै वडा कार्यालयलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराईएको एभरेष्ट बैंक लिमिटेड कोहलपुर शाखा प्रमुख सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिए । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पहलमा शुक्रबार कोहलपुर नगरपालिका वडा […]
शनिबार पनि बैङ्कहरू पूर्णकालीन रुपमा खुला राख्न निर्देशन
३० जेठ, काठमाडौं (एजेन्सी)। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भोलि शनिबार बैङ्कहरू पूर्णकालीन रुपमा खुला राख्न निर्देशन दिएको छ । क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले ३२ जेठसम्म शनिबार तथा सार्वजनिक बिदामा समेत शाखा कार्यालयहरू खोल्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले राजस्व […]
महेन्द्र सेडाईको दशैं आयो” बोलको गीत सार्बजनिक
Posted on September 28, 2020 September 28, 2020 Author Hari Adhikari
Posted on September 20, 2020 September 20, 2020 Author Hari Adhikari
Posted on February 5, 2021 February 5, 2021 Author Hari Adhikari